Kutoreswa kwendege kuSingapore kwakawedzera kusvika kumagumo eVTL
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Singapore Kupwanya Nhau » Kutoreswa kwendege kuSingapore kwakawedzera kusvika kumagumo eVTL
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Singapore Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Nzira dzekufamba dzakavharirwa (VTLs) dzakaunzwa mukutanga kwaGunyana, zvichibvumira vafambi vanoenda kuSingapore kuti vadzivise kuve pasi pechiziviso chekugara-pamba kana vakatoita bvunzo dzakawanda dzeCCIDID-19 PCR.
Chirevo chitsva chinoratidza kuti pakanga paine kuwanda kwekutora ndege kubva nekuenda Singapowo musi waDecember 22 gore rakapera, sezvo vafambi vakamhanyira kurova kumiswa kwe Singapowo's vaccinated travel lanes (VTLs), iyo yakashandiswa kudzikamisa kupararira kweOmicron musiyano.
MaVTL akaunzwa mukutanga kwaGunyana, achibvumira vafambi vanoenda kuSingapore kuti vadzivise kuve pasi pechiziviso chekugara-pamba kana vakatoita bvunzo dzakawanda dzeCCIDID-19 PCR. Pakupera kwaDecember, Singapowo yaive nemaVTL munzvimbo nenyika makumi maviri neina.
Musi waZvita 22, Singapowo yakazivisa chando pakutengesa tikiti reVTL kubva pakati pehusiku ihwohwo kusvika 21st Ndira, apo pachave ne50% chivharo pane yapfuura quota. Zvakadaro, vafambi vakatobata tikiti rendege yeVTL vaigona kuenderera mberi nekupinda muSingapore pasi peVTL pazuva ravakaronga. Zuva iro, kutengeswa kwematikiti ekunze kwakakwira kusvika kanopfuura kana paavhareji yezuva nezuva yevhiki rapfuura uye kupinda zvakapetwa kaviri.
Muvhiki rinotevera (Zvita 23 - Zvita 29) matikiti akapihwa ekufamba mukati akadonha ne51% uye akabuda akadonha ne76%, zvichienzaniswa nesvondo rapfuura.
Ongororo yemisika yepamusoro yeSingapore yakaratidza kuti vese gumi vepamusoro vakatambura nekudonha kwakanyanya, kwenhamba mbiri mukubhukidza, kunze kweHong Kong, iyo yakadonha ne8% uye Dubai, yaive 20% kumusoro kwekare. vhiki.
Ongororo yenzvimbo gumi dzepamusoro dzakaratidza kudzikira kwakanyanya kwekubhuroka kwendege vhiki mushure mekumiswa kweVTL, kunze kweNetherlands, iyo yakawedzera 11%.
Nzira dzekufamba dzakabaiwa dzakabatsira zvikuru kufambisa kufamba kuenda nekubva kuSingapore, sezvo misika minomwe yemisika gumi yepamusoro uye nzvimbo pfumbamwe dzepamusoro gumi inyika dzeVTL. Ini ndinofungidzira kusimba kweiyo Netharenzi sekuenda kunofurirwa ne KLM, iyo parizvino inotakura kunze kwenyika ine chikamu chikuru che Singapowo musika, nehuwandu hwezvigaro.